Isikhungo sedolobha lasePalmeira iVilamoura
Quarteira, Faro, i-Portugal
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Julia
U-Julia Ungumbungazi ovelele
I-Blue Apartment imaphakathi nedolobha laseVilamoura, etholakala emizuzwini emi-2 ngokuhamba ngezinyawo ukusuka kuzo zonke izindawo zokudlela, i-marina, imigoqo namabhishi. Esitezi sesi-3 sinendlu yokuphumula ene-TV (Netflix) kanye negumbi lokudlela elinekhishi elinempahla, igumbi lokugezela kanye nekamelo elikhulu lokulala. umbhede kasofa wabantu ababili endlini yokuphumula. I-balcony ebheke egumbini lokuphumula ivumela ukuthi ukwazi ukudla ngaphandle. Indawo yokupaka iyatholakala
Ifulethi lisesakhiweni esincane imizuzu emibili ngokuhamba ukusuka enkabeni yedolobha laseVilamoura. .. Ifulethi lilungele amaholide amafushane namade ngasogwini lolwandle. Ifulethi yisimanje futhi ivulekile. Lena ikwisitezi sesi-3 kanye ne-lift. Kunama-tv ama-2 aneziteshi zamazwe ngamazwe ne-WiFi. Ikhishi lifakwe i-microwave, ifriji, ifriji, umshini wokuwasha izitsha, umshini wekhofi we-nespresso, iketela, i-toaster....
Kukhona nomshini wokuwasha owodwa endlini yokugezela. Sihlinzeka ngamalineni namathawula okugeza ngaphandle kwentengo eyengeziwe.
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 umbhede wosofa, Umbhede wengane e-1
4.89 ·125 okushiwo abanye
4.89 · 125 okushiwo abanye
Ifulethi litholakala enkabeni yedolobha laseVilamoura. Isakhiwo cishe ngaphambi kwedamu lokubhukuda likamasipala laseQuarteira. Ngemizuzu emi-2 ngokuhamba usuka kuzo zonke izitolo, iMcDonalds kanye ne-marina. IVilamoura yidolobha elihle lapho kukhona isikole segalofu kanye ne-tennis. Ikhasino eyodwa, ama-nightclub amaningana, i-diving club, nezinye izindawo zokungcebeleka. Iningi labavakashi lihlala eduze ne-marina njengoba lingathola izindawo zokudlela eziphuma phambili, ama-cocktail asezingeni eliphezulu kanye nokuphila kwasebusuku kwezinga eliphezulu.
Ngiyatholakala nganoma yisiphi isikhathi ukuphendula imibuzo yakho. Ungangithumelela ama-mail noma ama-sms..
Inombolo yepholisi: 85842/AL
Hlola ezinye izinketho ezise- Quarteira namaphethelo